अहिलेको रेल देखाएर इज्जत राख्न खोज्नु त फरिया उचालेर स्त'न ढा'केजस्तै हो - Rising Dainik
अहिलेको रेल देखाएर इज्जत राख्न खोज्नु त फरिया उचालेर स्त’न ढा’केजस्तै हो
September 19, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on अहिलेको रेल देखाएर इज्जत राख्न खोज्नु त फरिया उचालेर स्त’न ढा’केजस्तै हो
प्रधानमन्त्री ओलीको सपना, उनको योजना रेल यथावत विपना भइदियो- रेल आयो ! सामाजिक संजाल आज भोलि यति छिटो छ कि बहस, पैरवि, फैसला बनेर कुनै पनि बिषय घडिको सु’ई चले जस्तै सेकेण्डमै आइहाल्छ। नेपालको कुना मात्र होइन विश्वको हरेक कुनामा पुगेका नेपालीलाई यो हप्ता जनकपुर-जयनगर रेलको बिषयले छोयो । सपनामय रेल साँच्चै विपनामा आउँदा दसैको बेलामा नयाँ लुगा लगाउन पाएको बालकको जस्तो कुतकुति भएको देखियो । राणा कालमै राजधानी काठमाण्डूमा रेल कुदेको नेपालका लागि गणतान्त्रिक युगमा रेल नौलो हुनु नपर्ने हो। भैदियो।
रेल नचढेपनि रेलको खास व्याख्या गर्न सक्ने भैसकेका छौं हामी। राजनीतिको मुख्य नारा रेल भएको जो छ। बिश्वमा रेलसेवाले कस्तो फड्को मार्यो सोको स्मरणसमेत गर्दा नेपालको रेलसेवामा भएको झेल प्रष्ट छ। रेल आयो यो सरकारले गर्यो है आहा ! भनि कि रमायो यात वि’रोध जनायो | देशमा बिकाश हुनु, रेल आउनु, पानीजहाज चल्नु एकदम राम्रो कुरा हो ! यस्को लागि डटेर काम गरे सरकारलाई सबैले समर्थन र प्रसंसा गर्नै पर्छ ! तर यहाँ रेल राजनीति भैरहेको प्रष्ट छ ।
सन् १७६३ मा जेम्स वाटद्वारा वाष्प इन्जिनको विकासपछि आधुनिक रेलको विकास भएको हो। सन् १८४६ देखि ५० को दशकमा हङ्गेरी, फ्रान्स, स्पेन, स्वीट्जरल्याण्ड आदि मुलुकमा रेलसेवा प्रारम्भ भएको पाईन्छ। सन् १८५७ देखि बेलायतले पहिलो पटक स्टिल रेल सञ्चालनमा हो। सन् १८६३ मा लण्डनमा संसारकै पहिलो भूमिगत रेलसेवा शुरु भएको पाईएको छ। सन् १८७९ मा जर्मनीले पहिलो यात्रुवाहक विद्युतीय रेल सञ्चालनमा ल्यायो भने सन् १९१३ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा पहिलो पटक विद्युतीय रेल प्रयोगमा आएको हो ।सन् २००४ मा विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा कुद्ने रेल चीनमा सञ्चालन भयो । यो रेल ४ सय ३० किलोमिटर प्रति घण्टा कुद्थ्यो ।
यसरी विश्वमा रेलको विकास हुँदै गएको पाईन्छ । हाल सबैभन्दा बढी रेल नेटवर्क भएको मुलुक अमेरिका हो । त्यसपछि चीन र भारत रेल नेटवर्कमा अन्य देशभन्दा अघि छन् ।यसै अवधारणवाट विश्वमा दू्रत गतिको रेल सबैभन्दा पहिला जापानले कुदायो । अनि जापानी प्रविधिलाई समेत पछि पार्ने गरी चिनले द्रूत गतिको रेलसेवा सञ्चालन गर्यो । चीनले निर्माण गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा द्रुत गतिको रेल सेवा चीनको राजधानी बेइजिङ्देखि सांघाई रुटमा सञ्चालनमा छ। दु्रत गतिको रेल कुदाउने दौडमा चीनले बाँकी विश्वलाई पराजित गरिसकेको छ ।
सिरहामा बो’क्सीको आ’रोपमा नि’र्घात कु’टिएकी महिलाको धरानमा उपचार हुँदै
एमालेबाट नि’स्काशित गर्नुपर्ने नेताको लिस्टनै छ ओलीसँग , को-को छन् हेर्नुहोस !
April 2, 2021 April 2, 2021 Ramash Kunwar
उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा भोलिदेखि अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द